शब्दकोश: कविजी, पहिले मान्छे बन्नुस् !
कैलाश September 04, 2008
ए बा! धाइवा जी यो पोष्ट पढेर त म एकचोटी मजैले ढलेको महशुश गरे। कुराहरु घुमाईघुमाईकन मजैले फन्को लगाइदिनुभाछ लेखक/पाठक, कवि/श्रोता सबैलाई।
सबै कुरो प्रष्टै छ। भएनि एउटा लफडा गरीहाल्छु है। आखिर तपाईले यही पोष्टमा केही लफडाकै चर्चा गरिहाल्नुभाकै छ क्यारे। त्यसैको आडमा सन्दर्भ बेग्लै भएनि यसो कुरो कोट्याउँछु है।
"विधिअनुरुप बिहे गर्न खोज्ने अनि सिउँदोको सीधा रेखामा सिन्दूर भर्न नजान्ने भएर कसरी हुन्छ ?" र "कविजी, पहिले सिन्दूर हाल्ने हात सोझ्याउनुस्" भन्ने वाक्यलाई महिला कविहरुको हकमा मिलाउँदा पटक्कै मेल खाएन। यो वाक्यले तपाईको गहन विचारलाई पुरुष कविहरुकै हकमा मात्रै लगेर थुपारीदियो। आखिर कवि या लेखक त दुवै हुन् नि। अनि दुवैको हकमा उही कुरा लागू हुने होला हैन र? यदि त्यसो हो भने दुबैलाई समेट्ने वाक्य तपाईको शब्द भण्डारमा बेस्कन छन् भन्ने मेरो विश्वास हो। बस अलिकति खोतल्दैमा पर्लक्क पल्टिन्छ। यदि त्यसो हैन भने त बाबै! या त नाक घोक्राउँनै पर्ने हुनसक्ला महिला कविहरु खरो उत्रिएकाछन् भनेर। या त महिला कविहरु नै रहेनछन् कि क्याहो भनेर पीरै गर्नुपर्ने बेला पो भो त। यी दुवैमा मेरो बकम्फुस्से कुरा बढी र साँचो कुरा कमै मात्रामा छ होला भन्ने मेरो अनुमान छ।
यो नियतवस भएको हैन, म जान्दछु। म कविताको क पनि नजान्नेलाई कविता लेख्न प्रेरित गर्ने व्यक्तिबाट यस्तो हुन पुग्नु ख्याल नगरेरै हुन सक्ला। तैपनि एउटा साथीको नाताले मनमा लागेको कुरा किन थन्काइराख्नु भनेर नि ओकलीहालेको।
यो बारे अरु कुरामा लेख्न सक्ने ल्याकत ममा आउन बाँकी छ है साथी।
क्या काइदाको मनको कुरो गर्दिनुभयो धाइबाजी! मेरो मनमा पनि यस्तै कुरा धेरै खेल्छन्, लेख्ने आँट जुटाउँदै थिएँ, तपाईँलेनै भ्याइदिइसक्नुभएछ।
नेपाली साहित्यमा कविताको ब्यापक मानमर्दन भएको छ। लेख्न नजान्नेले त लेख्छन् लेख्छन् तर लेख्न जान्नेहरुले पनि अरु लेख्न छोडेर कवितै लेख्छन्। वर्तमानका धेरैजसो 'स्थापित' नेपाली कविहरुका कविताहरु अनावश्यक लम्बेतान हुन्छन् र कविता हो कि निबन्ध हो छुट्याउन मुश्किल हुन्छ। अलिक मेहेनत गरे गतिलो निबन्ध र यदाकदा कथानै बन्ने जिनिसलाई पनि मान्छेहरु किन ऊँट आकारकै सही, कविताकै टोपी भिराईदिन चाहन्छन्, बुझ्न गाह्रो छ।
परिणाम, नेपाली निबन्ध भोकमरीले सुकेको छ र नेपाली कविता चाहिनेभन्दा धेरै खाएर, अजीर्ण भएर रोगी र लोसे भएको छ।
भाषा-शैलीगत कुरा नबुझी लेख्नेसंग लेखेकोमा विरोध वा गुनासो भन्दा पनि अलिक विधाको मान राखेर लेखिदिनुस् भन्ने आग्रहमात्र हो यहाँ धाइबाजीको, मेरो बुझाईमा। मेरो विचार पनि ठ्याक्कै मिल्न आइपुग्यो, बडा खुशी लाग्यो।
साहित्य प्रकाशनका लागि पनि नातावाद-कृपावाद चाहिने हाम्रो अजीब देशमा कस्का रचनाले सजिलै ठाउँ पाउँछन् र को-को स्थापित हुन्छन्, यसको कथा फेरि बेग्लै छ।
कैलाशजीले औंल्याउनुभएको तथ्य भने जायज छ है धाइबाजी। यसमा भने ध्यान पु-याउनैपर्छ। यतिमात्रै होइन, पूरै नेपाली साहित्य आजसम्म पुरुषको आँखाले देखिने प्रतीक र बिम्बहरुको भर परेर बाँचिराखेको छ। सबैतिर ध्यान दिएर लेखिएन भने यो परिवेशलाई फेर्न गाह्रो हुनेछ।
दीपक जडित September 10, 2008
म , भुत्ते खुर्पा लिएर दाउरा घाँस जानेलाई जंगलमा जनावारको डर त छँदैछ त्यसमाथी दाउरा घाँसको भारीनै पुर्याउन नसकिएलाकि भन्ने डर भए झैं , तर्सिरा'छु गाँठे !
कैलाश September 11, 2008
हैन दीपकजी किन त्यसरी तर्सिनुभाको नि। मलाई त तपाई तर्सेको पटक्कै मन परेन। तपाई त खुकुरी बोकेको मान्छे। भुत्ते भएर के भो त जंगलमा ढुंगाको के कमी। सँधै खुकुरी बोक्दै आएको मान्छेले ढुंगामा शान लाउन कुन ठूलो कुरा भो र। अनि त च्वाट्ट च्वाट्ट काट्ने भइहाल्छ नि। अनि त के चाहियो र जेसुकै पनि त्यसैले ढाल्न सक्नुहुन्छ नि दीपकजी।
दीपक जडित September 11, 2008
हो त है कैलाश जी , ढुँगा पहरामा पनि खुर्पा , खुकुरी उध्याउन सकिन्छ भन्ने त होसै भएनछ । वास्तवमै खुकुरी , खुर्पा अर्जाप्ने साधन नहुनेले ढुँगामै उध्याउनु पर्दो रहेछ ।
कैलाशजी अनि वसन्तजी दुवैप्रति अत्यन्तै ऋणी छु है । प्रति-प्रतिक्रिया ठेल्न अलि बेर भएकोमा सधैँजस्तै माफीको भाका पनि समक्षमा बिसाउँछु । ब्लग सुरु गरेयता यत्तिको वेगवान् झटारो खाएको थिइनँ, आज ताल पर्यो । स्वाद पनि लाग्यो, आत्मा साक्षी राखेर भन्दा यहाँहरू दुवैको औँल्याइलाई आफूबारेको प्रस्ट रौँचिरा विश्लेषण मानेको छु । आगामी दिनमा पनि यसैगरी मन खोलेर अभिमत दिन सङ्कोच नमानिदिनुहोला । नत्र त यहाँ कतै हावाकै तन्नामा गुल्टी खेलाउने बोक्रे प्रशंसाका भारी त कतै भित्तैमा पुर्याएर किचिमिची पार्ने अन्धाधुन्ध आलोचना -यसलाई खोइरो खनेको भनौँ कि अश्लील हर्कत भनौँ) नेपाली आनीबानीको राष्ट्रिय संस्कृति नै भइसकेको छ ।
अब मुद्दातिर लागौँ । कैलाशजीको ठम्याइ हरेक हिसाबले मनासिब छ । मैले पनि लेखाइमा उनिएर आएको त्यो पाटोलाई पूरै ओझेलमा पारेर सोइपरी सबै सही भनेझैँ भएछ, तपाईँले भनेपछि मेरो भूलसँगै नेपाली साहित्यको पूरै एक फक्लेटा खियादार खम्बा चिरिएर देखा पर्यो । यो कुरा उजागर पार्नमा वसन्तजीको बल पनि मलाई भरपूर मिल्यो है ।
निश्चय पनि त्यो मेरो नियोजित र जानाजानी चिन्तन थिएन । सायद पितृसत्तात्मक समाजको धङधङी यो रगतमा जन्मँदै आएको थियो र त्यो लेखाइमा समेत हुँडलिएर पोखिएको हो भन्नु त म उम्किने दाउ मात्रै हो । गहिरोसँग जकडिएका विभेदकारी प्रचलन र संस्कारलाई सही, अर्धसही र गलत रुपमा छुट्याई संरक्षण, संशोधन र उन्मूलन गर्ने पुस्ता त हाम्रै हो ।
आजसम्म पुरुषवादी दृष्टिविन्दुबाटै एउटा ठूलो हिस्साको मूलधारको साहित्य लेखिएर आयो, त्यो अद्यापि जारी छ (मेरै उदाहरण काफी छैन र !) । अझ मुख्यगरी गीत-गजलमा यस्तो लेखाइ हावी छ । पुरुषवादी मानसिकताको सिकार सिङ्गो साहित्यवृत्त हुँदा तपाईँजस्तै चिन्तित म पनि छु । यस्तो कुप्रथाको निरन्तर क्रमसङ्गतिमा समग्रमा समझदार युवा जमात नै पिरोलिन्छ । आम पाठकका लागि त्यो पनि सिङ्गो कवि जमातलाई आहृवान गर्दै लेखिएको एउटा लेखमा 'सिन्दूरको रेखा कोर्न हात सोझ्याऊ कविजी' भन्दा त्यसबाट नारी कविहरूलाई उपेक्षाभाव र विच्छेदको रेखा कोरिएको प्रस्टै छ । लेखनमा विषयवस्तु र प्रस्तुतिको यस्तो विभाजनकारी सीमा पाठक/स्रोताको हकमा पनि पक्षपातपूर्ण छ र आजसम्मका धेरै साहित्यमा रहँदै आएको छ ।
आगामी लेखाइमा पक्कै खबरदारी गरेको छ । निश्चय पनि नारी-पुरुष स्रष्टा र पाठक दुवैलाई समेट्ने विम्ब र प्रतीकको शब्द/वाक्यतर्फ ध्यान लाग्नेछ । नारी कवि/लेखक खरो उत्रिएका छन् भन्नेमा शङ्कै छैन । म आफैँ पनि घरभित्र एउटी नारी लेखकको स्याहारसम्भार र विकासमा दत्तचित्तले सहयोगी बल दिइरहेको मान्छे, त्यस्तो अन्याय कसरी पो हुन सक्थ्यो र ? बडो पुण्यकारी दिशानिर्देश भयो । तर यो लेखाइ एउटा उदाहरण मात्रै हो । बहसको थालनीको लागि जग उठेको छ । नारीको मुद्दा नारीहरूले मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने सङ्कुचित सोच थोत्रिइसक्यो । हातेमालो गर्ने हात कैलाशजीसँगै वसन्तजीलगायत हामी सबैको छ ।
पुनः आभार चढाउँछु तपाईँहरूप्रति ।
जोतारे धाइबा September 19, 2008
Their is no reason to have fear along the journey. Becoz we have to do it.